AS ROMA VS EMPOLI: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
AS ROMA VS EMPOLI: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Raage April 1, 2017
(Roma) 01 Abriil 2017 – Waxaa caawa fiidkii ballansan kooxaha AS Roma vs Empoli, jeer ay kooxda Roman-ku doonayso inay xawaareheeda sii karraariso maaddaama aysan weli soo xaqiijinin boos rasmi ah oo ay wax kasti isbedeli karaan.
Dhanka Rom: Khadka ayay dhibaato ka haysataa macallin Spalletti iyadoo uu god wayni ka qodan yahay maaddaama ay ka maqan yihiin Strootman iyo De Rossi. Wuxuu sidaa daraadeed doonayaa inuu Paredes ka dhinac dheelsiiyo Nainggolan maaddaama uu Grenier jilibka ka xanuunsanayo. Weerarka Salah ayaa wehlinaya El Shaarawy iyo Perotti.
Dhanka Empoli: Martusciello waxaa usoo kacay Mchedlidze kaasoo lkn kaydka kululayn doona. Bellusci ayaa isna soo kabtay, wuuse ciyaari doonaa isagoo buuxinaya garabka Cosic.
Inter Milan oo jeexday qorshe qurux badan oo ay kusoo qaadanayso Antonio Conte
Maalinta loo qabtay iibka AC Milan oo sabab khuraafi ah darteed loosoo hormarinayo! (Gooma?)